မပေါင်းအပ်သော လူ (၃) မျိုး – ADS Myanmar Blog
မပေါင်းအပ်သော လူ (၃) မျိုး
မိမိတို့နေထိုင်ရာ လောကကြီးတွင် သူငယ်ချင်းအဖြစ် မပေါင်းသင့်၊မပေါင်းအပ်သော လူများ၏ အကြောင်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အလိုက်သင့်ပေါင်းပြီး အတွင်းကြိတ်မကောင်းကြံသောသူ
မိမိအား အလိုက်သင့် ရေလိုက်ငါးလိုက် ပေါင်းသင်းကာ မိမိအားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တိုက်ခိုက်တက်သော သူမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကို လမ်းခင်းကာ နင်းချေပစ်လေ့ရှိသော သူများပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူမျိုးကို စွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။
၂။ လိုရင် တစ်မျိုး၊ မလိုရင် တစ်မျိုး ဆက်ဆံတက်သူ
မိမိထံမှ အခွင့်အရေးလိုချင်လျင် တစ်မျိုး၊ အခွင့်အရေး မရနိုင်လျင် တစ်မျိုး၊ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆက်ဆံတက်သော သူများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ မိမိအောင်မြင်ချိန်တွင် မိမိထံ၌ ရှိနေပြီး ကျရှူံးချိန်တွင် စွန့်ခွာတက်သော “သာကူး” လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။
၃။ မိမိကောင်းစားရေးအတွက် သူတစ်ဖက်သားကို ချောက်တွန်းတက်သူ
မိမိလျောက်လှမ်းရာ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် သူတစ်ပါးကို နင်းချေပြီး လျှောက်တက်သော လူစားမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော မိမိကိုယ်တိုင်ဘဝကို မတည်ဆောက်ဘဲ သူတစ်ပါးကျရှုံးမှ မိမိဘဝအောင်မြင်မည်ဟု တွေးထင်တက်သော လူမျိုးပင်ဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ။ ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ လူ (၃) မျိုး ရှိနေခဲ့ရင်တော့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဖို့ ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါရစေ ။ ။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ . . . သင့်အိမ်မှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Ads.com.mm အခမဲ့ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ https://www.ads.com.mm/posts/new လင့်ခ်အတိုင်း အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ရောင်းချလို့ ရပါတယ်။
မပေါငျးအပျသော လူ (၃) မြိုး
မိမိတို့နထေိုငျရာ လောကကွီးတှငျ သူငယျခငျြးအဖွဈ မပေါငျးသငျ့၊မပေါငျးအပျသော လူမြား၏ အကွောငျးမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အလိုကျသငျ့ပေါငျးပွီး အတှငျးကွိတျမကောငျးကွံသောသူ
မိမိအား အလိုကျသငျ့ ရလေိုကျငါးလိုကျ ပေါငျးသငျးကာ မိမိအားနညျးခကျြမြားကို အခှငျ့ကောငျးယူကာ တိုကျခိုကျတကျသော သူမြိုးပငျဖွဈသညျ။ သူတဈပါးမကျြရညျကို လမျးခငျးကာ နငျးခပြေဈလရှေိ့သော သူမြားပငျ ဖွဈသောကွောငျ့ ထိုသူမြိုးကို စှနျ့ခှာသငျ့ပါတယျ။
၂။ လိုရငျ တဈမြိုး၊ မလိုရငျ တဈမြိုး ဆကျဆံတကျသူ
မိမိထံမှ အခှငျ့အရေးလိုခငျြလငျြ တဈမြိုး၊ အခှငျ့အရေး မရနိုငျလငျြ တဈမြိုး၊ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲဆကျဆံတကျသော သူမြားကို ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။ မိမိအောငျမွငျခြိနျတှငျ မိမိထံ၌ ရှိနပွေီး ကရြှူံးခြိနျတှငျ စှနျ့ခှာတကျသော “သာကူး” လူမြိုးပငျ ဖွဈသညျ။
၃။ မိမိကောငျးစားရေးအတှကျ သူတဈဖကျသားကို ခြောကျတှနျးတကျသူ
မိမိလြောကျလှမျးရာ ခွလှေမျးတိုငျးတှငျ သူတဈပါးကို နငျးခပြွေီး လြှောကျတကျသော လူစားမြိုးဖွဈသညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ဆိုသော မိမိကိုယျတိုငျဘဝကို မတညျဆောကျဘဲ သူတဈပါးကရြှုံးမှ မိမိဘဝအောငျမွငျမညျဟု တှေးထငျတကျသော လူမြိုးပငျဖွဈသညျ။
သူငယျခငျြးတို့ရေ ။ ။ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ယခုဖျောပွထားတဲ့ လူ (၃) မြိုး ရှိနခေဲ့ရငျတော့ အပေါငျးအသငျးမလုပျဖို့ ကွိုတငျသတိပေးလိုကျပါရစေ ။ ။
သူငယျခငျြးတို့ရေ . . . သငျ့အိမျမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ကုနျပစ်စညျးမြားကိုတော့ ကြှနျတျောတို့ Ads.com.mm အခမဲ့ကွျောငွာဝကျဘျဆိုကျမှာ https://www.ads.com.mm/posts/new လငျ့ချအတိုငျး အခမဲ့ကွျောငွာတငျရောငျးခလြို့ ရပါတယျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on June 14, 2016 Categories Ads.com.mmTags Knowledge
Next Next post: “ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ”